(भरद्वाज बाट पठाईएको)
"भारद्वाज" अनुप्रेषित यहाँ हुन्छ। यो, अन्य प्रयोगहरूको लागि, भारद्वाज (disambiguation) हेर्नुहोस्।
भारद्वाज हिन्दुहरुका एक महान ऋषि हुन्। भरद्वाज प्रसिद्ध सप्तर्षिमध्केका एक ऋषि हुन् । तैतित्तरीय ब्राहण भन्ने ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार उनी वेदहरुका पूर्ण ज्ञाता बन्न चाहन्थे । यसको लागि उनले परिश्रम गरिरहेका थिए, किनतु वेदको पार पाउन कठिन भइरहेको थियो । त्यसपछि उनले इन्द्रको तपस्या गरेर एकएक सयका दरले तीनपटक सम्म वेदको अथ्ययन गर्ने वरदान पाएका थिए । तीनसय वर्षको आयु थप पाउँदा पनि वेदहरुको पूर्ण ज्ञान गर्ने सफलता प्राप्त भएको थिएन । यिनी उद्विग्न र निराश भएर बसेको बेलामा देवराज इन्द्र थिनका अगाडि प्रकट । अनि उनले गगनचुम्बी तीन पर्वत थिनका लगअडि खडा गराए । ती पहाडमध्येबाट एक मुठी चम्किलो बस्तु लिएर इन्द्ले भरद्वाज संग भने तिमीले तीनसय वर्षभित्र यी तीन पहाडबाट मुठीभर वेदको ज्ञान प्राप्त गरेका छौं । अब तिमीले नै विचार गर यी पहाडहरु तिमी कहिल्यौ पार गर्न सकौला ? वेद अनन्त छन् यिनको अन्त पाउन कसरी सम्भव हुन सक्ला ?
भरद्वाज ऋषि वेदको यस्तो अनन्ततालाई जानेर ज्यादै आश्चर्यचकित भए, साथै अनि प्रशन्न पनि । वेदहरुको ईश्वरका रुप हुन्, जब ईश्वर नै अनन्त छन् भने वेद अनन्त हुनु स्वभाविकै भयो । भरद्वाज ऋर्षिले ऋग्वेदको छैटौं मण्डलका अनेक सूक्तहरुको दर्शन पाएका छन् । अर्थववेदका पनि अनेक मन्त्र यिनले देखेका छन् । यी देवगुरु वृहस्पतिका छोरा हुन् । यिनको जम्म हुँदा वृहस्पति र उनकी पत्नी ममताको बीचमा विवाद भएको थियो । बृहस्पति ममतासंग यो छोरा को पालनपोषण तिमी गर भन्थे भने ममता भन्थिन् – हुँदैन, यसको पोषण तपाई गर्नुहोस् । यसकारण थिनको नाम ‘भरद्वाज’ भएको हो । भरद्वाजको उचित पालनपोषण मरुद्गणले गरेका हुन् । एक पतक दुष्यन्तका छोरा भरतले ‘मरुत्स्तोभ’ नाम भएको यज्ञ गरेका थिए । त्यतिखेर मरुद्गणले उनलाई पुत्ररुपमा भरद्वाजलाई प्रदान गरेका थिए । यसपछि भरद्वाज ऋषिले भरद्वारा यज्ञ गराए जसबाट उनलाई ‘वितथ’ नाम गरेको पुत्र प्राप्त भयो ।
आयुर्वेदको प्रसिद्ध ग्रन्थ चरकसंहितामा आयुर्वेदको पृथ्वीमा आवरण गराउने व्यक्तिको रुपमा ऋषि भरद्वाजको वर्णन गरिएको छ । पहिले तपस्या, ब्रत आदि गरेर संयमका साथ जीवन बिताउने मानिसहरुलाई पनि रोगहरुले विध्नरुपमा आएर बाधा पुर्याउन थालेपछि हिमालयमा ऋषिहरुको सभा बस्यो । तयस सभामा उपस्थित ऋषिहरुमा भरद्वाज पनि हुनुहुन्थ्यो । सभाले मानिसहरुमा रोगहरु बढेर दुःख भएकोमा त्यसको समाधान गर्ने उपायको लागि स्वर्गका राजा इन्द्रको शरणमा जाने निर्णय गर्यो । अब स्वर्गमा को जाने भन्ने प्रश्न उठ्दा सबभन्दा पहिले भरद्वाज मुनिले यस काममा आफूलार्य खटाइयोस् भनी अनुरोध गर्नुभएकोले वहाँलाई स्वर्ग गएर इन्द्रबाट उपयोगी ज्ञान लिएर आउने भनी पठाईयो । उहाँले इन्द्रलाई भेटी त्यसको समाधान बताइदिन बिन्ती गर्नुभयो । महर्षि भरद्वाज को बुद्धिवैभव देखेर इन्द्रले उहाँलाई आयुर्वेदको उपदेश गर्नुभयो । त्यसबाट आयुर्वेदको अध्ययन गर्नुभयो । यो घटनाबाट महर्षि भरद्वाजको लोककल्याण तप्परता, दयालुपन, साहस आदि गुणहरुले राम्रो संकेत पाइन्छ ।
यतिमात्र होइन, रामायणको कथामा उहाँ आश्रममा भगवान् रामचन्द्रलाई भेट गर्न आएका सेनासहितका भरतको पूर्ण राजसी सम्मानका साथ बासको व्यवस्था भएको घटना उल्लेखित छ । यसका अतिरिक्त धर्मशास्त्रको इतिहास भन्ने ग्रन्थमा भरद्वाजलाई श्रौतसूत्र र गृहृयसूत्रका लेखक तथा धर्मशास्त्रका व्याख्याताको रुपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
जब भरद्वाजलाई वेदहरु अनन्त रहेछन् वेदहरुको पूर्णज्ञान गर्न त सयौं जन्म पनि पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने जानकारी भयो । त्यस बखत देवराज यन्द्रले त्यसतर्फ लाग्नुको सट्टा मैले बताएअनुसारको यज्ञ गर, तयसैबाट सम्पूर्ण वेदको अध्ययनबाट हुने लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछौ भन्ने सुझाव भरद्वाजलाई दिएका थिए ।
महर्षि भरद्वाजले योगवासिष्ठ महारामायण पूर्ण रुपले प्रश्न उत्तर पूर्वक – श्रीवाल्मीकी महर्षि संग श्रवण गर्नु भएको प्रसंग पनि योगवासिष्ठको अध्ययनबाट ज्ञात हुन जान्छ । 
साभार गरिएको :भारतकाेशबाट#jbraj
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=भारद्वाज_ऋषि&oldid=675741" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २०:५३, ३० सेप्टेम्बर २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।